Waze Mpaghara: Ka ndị ọkwọ ụgbọ ala Waze hụ azụmahịa gị mgbe ha nọ gburugburu | Martech Zone
Oge ọ bụla m banyere n’ụgbọala m, ihe mbụ m na-eme bụ ijikọ ekwentị m ma mepee ya Waze ngwa. Ọ karịrị atụmatụ niile nke Google (onye nwere ya) ma ghara ịlafu gị dịka Apple… niile ka ị na-eweta ihe egwu na okporo ụzọ. Ọ bụrụ na ịnwere ụkwụ dị arọ ma hụ onwe gị ịnweta tiketi, ọ na-enye aka dị ukwuu dịka ịnwere ike ịkọ ma hụ ọnyà ọsọ ọsọ. Na ndị uwe ojii leda Waze anya.
Waze na-enye ndi ahia ulo oru elu Waze Mpaghara. Dezie mmefu ego kwa ụbọchị na otu azụmaahịa, azụmaahịa gị na-akwalitekwa nsonaazụ ọchụchọ ndị ọkwọ ụgbọala. Ahịa nso azụmahịa gị na-gụrụ akara mkpọ na-egosi ọnọdụ gị na eserese ngosi. Mgbe ndị ọrụ na-enweta nsonaazụ ahụ, enyere ha ozi ndị ọzọ ma kpalie ha ịnyagharịa ma ọ bụ chekwaa ọnọdụ ahụ.
Waze Mpaghara na-enye dashboard ebe azụmahịa nwere ike:
Hụ azụmahịa ha kwa ụbọchị
Soro njikọ aka, gụnyere nchọgharị na nchekwa
Melite mkpọsa okike, ebe azụmahịa na mmefu ego
Nye ọnụahịa bụ ihe atụ CPM maka ihe dị ka $ 2 kwa ụbọchị ma kwụọ ụgwọ kwa ọnwa na kaadị akwụmụgwọ gị.
Deba aha ahia gi
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa karịa 10 ebe, ị nwekwara ike jiri Mgbasa ozi Waze. The interface awade ewere mkpọ, mobile ihuenyo takeovers, akụ, na a ma ama search N'ihi pụrụ isi chọta a pụrụ isi chọta n'ime mobile ngwa. Can nwekwara ike ịchọta ụdị ọkwọ ụgbọ ala na ebe ha na-anya ụgbọ ala, na ihe na-eme gburugburu ha (dị ka ihu igwe!).
Tags: ịnya ụgbọna-akwọ ụgbọala na mgbasa ozialagismapwezugawaze mgbasa oziwaze obodo
Dee 15, 2016 na 10: 22 AM
Waze nwere ike ịrụ ọrụ kacha mma n'igosi ndị ji ụkwụ aga, ụgbọ ala, igwe kwụ otu ebe na ụgbọ oloko ndị na-enwekarị ihe mberede. Anyị nwere data.
Dee 15, 2016 na 11: 03 AM
Jeff, ị na-agbagharị maka ọrịre? Ọ bụrụ otú ahụ, daalụ! 🙂